Baqattummaa irraa gara hojii uumuutti: Seenaa milkaawinaa lammii Itoophiyaa Awustraaliyaarraa - BBC News Afaan Oromoo
Baqattummaa irraa gara hojii uumuutti: Seenaa milkaawinaa lammii Itoophiyaa Awustraaliyaarraa
Image copyright DAWIT ETEFFA
Goodayyaa suuraa Ani yeroo baay'ee qonnaa abaaboo keessa yeroon hojjedhu haati manaan koo ammoo suuqii keessatti nagaddi
Obbo Daawiit Ittafaa jedhamu. Nama kennaa ogummaa fakkii kaasuu qabanii fi Itoophiyaatti kutaalee addaa addaa deemudhaan hojjetaa turaniidha.
Bara 1992 keessa baqattummaadhaan Awustraaliyaa galan. Achittis, hojii argamee hunda hojjechaa turan.
Hojiiwwan isaa jiruu oggannachuuf hojjataa turan keessaa fakkii kaasuu, beeksiisa barreessu, dizaayiin hojjachuufi mana bitanii haaromsuun gurguruu ni argama. Akkasumas suuqii abaaboon itti gurguramu saaqatan.
Wayita ammaatti ammoo lafa bituudhaan seenaa Oromoota Austraaliyaa jiran keessatti yeroo jalqabaatiif qonnaa omisha abaaboo gaggeessaa jiru. Seena isaniis akka armaan gadiitti nuuf hiraniiru:
Maaliif biyyaa akka baqatanii?
Biyyaa bara 1992tti yaa baqadhu malee isa duras sababii garaa garaatiin dararraa fi dorsiisi bifa hedduun narra gahaa ture. Haalloonni turanis jabaachaa dhufuun akkan baqadhu na godhan. Sababoota turan baay'ee keessaa gurguddo sadii kaasuun barbaada:
Sababii inni duraa: ''Kutaa biyya Ilubaabooritti, fakkii 'Imimmaan' jedhamu kaasee hoteela Baaroo jedhamutti fannisuu kootti.
''Haatii hoteela sanaas dubartii baay'ee na gargaaraa turan tokko waan ta'eef osoon heeyyama isaanii illeen hingaafatne ture akka kennaatti kanan fannise.''
Isaan boodas, hojii siyaasaa mootummaa qanessuu fi salphisu hojjete jedhamuun angaawoota naannichaa duraatti akka dhiyaatu taasifame. Gidiraa guddaa mana hidhaa ji'a tokkoon booda, wabii nama ajajaa dhibbaa na beeku tokkoon hidhaa keessa akkan lakkifamu ta'e.
Akkuma sanaanis hojiin achii qabulle utuun hinxumuriin akkan naannoo sana gaddhiise bahu ta'e.
Goodayyaa suuraa Fakkii mucaa gadadoon boo'uu
Sababii lammataa: Fakkii 'Haadha Hambisaa fi jireenya ishee' jedhamu kaasee magaalaa Biilaatti fannise.
Kaayyoo fi hiiki fakkii sanaas, gidiraa haati Oromoo tokko keessa dabartu agarsiisuuf ture.
Isheenis haadha hiyyeessaati. Hambisaan kun har'a illee jira. Ilmi Hambisaa waggaa darbe irreecha irratti du'e jechuu dhagahee baay'een gadde.
Haa ta'u malee fakkiin kun farra warraaqsaatii jedhamuun gara kutaa biyyaatti ergamte. Istudiyoon keessatti hojjedhus cufuun ananis na qabuuf jennaan jalaa miliquun waggoota torbaaf bakkan dhokkachaa ture gara Dirree Dawaatti baduuf dirqame.
Goodayyaa suuraa Yoom darbaa laata kuun?
Sababii saddaffaa: ''Waggaa torba booda ALA 1991 keessa jijjiramni mootummaa waan dhufeef, gara magaalaa Naqamteetti deebii'uun fakkii guddaa 'Oromiyaan kan Oromootii' jedhu hojjedhee magaalatti keessatti fannise.
Kunis ari'atama biraaf na saaxile. Fakkichas erga buusanii gubanii booda kan kaasees ni gubna jechuun na sakkatta'uu jalqaban. Anis dhokadhee baqachuun gara Finfinnee gale.
Achitti dorsiisi walfakkaataan itti fuufnaan gara Nagellee Booranaatti deemee turuun dhuma irratti gara biyyattii ollaa Keenyaatti ce'uuf dirqame.
Goodayyaa suuraa Qonnaan abaaboo haala qilleensa walqixaataa fi kunuunssa guddaa barbaada
Keeniyaa guyyaan galee jalqabee boqonnaa samuun argadhe. Kun jechuun Keeniyaa keessatti rakkinni narra hingeenyee jechuu miti. Poolisiin bakka bakkatti dhaabuun na rakkisu turaniiru. haa ta'u malee rakkoolee Keeniyaatti narra gahan kan biyyaa kootti narra gahee waliin gaafan madaalu, biyya keeniyaa caalchisee akkan galateeffadhu na godha.
Keeniyaarraa carraa deebisanii biyya sadafaa qubachiisuu argachuun oggasuma gara biyya Awustrraliyaatti cehe.
Awustiraaliyaan biyya nagaa fi hojiiti. Biyyattiin biyya bilisaa fi walqixummaan itti mirkanaa'e ta'usheetiin jireenya koof wabii fi boqonnaa guddaa argachuun gara fuula duraa saganteeffachuun eegale.
Namni hojii tuffatan wayittu hinbahanu!
Daawiiti Itafaa, Artistii fi abba qabeenyaa
Anis turtii keessa hojii boru ittiin jiraadhu irrattan xiyyeeffadhe. Hojiin ani duraan beeku aartii fakkii kaasuu, baanarii fi beeksiisa adda addaa barreessun jalqabe. Kunis ogummaan jaaladhutti akkan deebi'uu fi miila lamaan akkan dhaabadhu na godhe.
Itti aansees mana bituun haaromsee gurguruun galii horachuutti darbe.
Booda ammoo hojii abaaboo sirreessuufi gurguruu haadha manaakoo wajjin jalqabne. Haati manaakoo Kumeen jaalalaaf fedhii aartii abaaboo sirreessuu waan qabduuf baay'ee itti milkoofne.
Abaaboon gabaarratti baay'ee kan barbaadamu ta'uusaa hubachuun keenya ammoo gara qonnaatti akka gallu nu kakaase.
Lafa qonna kanaaf ta'u hektaara 10 bituun waggaa torbaan dura hojii qonnaa abaaboo jalqabne. Wayita ammaa kanattis hektaara 9 irratti misooma kana geggeessaa jirra. Namoota muraasaafis carraa hojii waqtii irratti hundaa'e banameera. Kunis biyya kanatti xiqqaadha. Haa ta'u malee hojii tufatamu miti. Fuuldurattis akka babal'atu abdii qabna.
Goodayyaa suuraa Waanan hojjadhutti nan gammada garaan koos na boqota
Akkan amanutti hojii kanatti milkoofneerra. 'Anaaf milkaa'uu jechuun safarri isaa waan hojjataniitti gammaduu dha. Hojii hojjannu hundaatti gamadaa hojjeenna. Abjuun keenyas dhugoomeera. Anaaf kanatu milkaa'iina.
Fiixaan bahiinsa jireenya koo keessattis gaheen abbaa fi haatii koo qaban olaanaa dha.
Haala mijataa hinta'in keessatti tattaaffi ciccimoo karaa qonnaa fi hanga Kumruuk Sudaanitti godhaa turan sana qalbeeffachaa guddachuu caalaa, kaka'umsa kan namaa ta'u hin jiru.
Anis karaakoo namootaaf kaka'umsa ta'eera jedhee yoo of himuun natti ulfaateyyuu, namoota keenya biyya kanatti waliin gurmaa'uun lafa hektaara 100-150 ta'u bituun hojii mataa isaanii jalqabanii jiraniif hanga tokko fakkeenya ta'eera jedheen amana. Isaan kanaatti guddoon gamada, yeroo yeroottis wal arguun yaadaa fi hamilee walii laachaa jirra.
Haalli osoo tolee gara biyyaa galee misooma irratti hirmaadhe natti tola ture. Garuu kun ammaatti waan ta'u hinfakkaatu. Haa ta'u malee, turus guyyaan akka dhufu nan abdadha. Gaaf tokko bekumsaafi muxxannoo koon uummata koo tajaajiluuf fedhii koo olaanaadha.
Kana malees, suuraalee dudhaa fi aadaa uummatichaa agarsiisan kaasuun godambaa biyyattii keessa naquun hawwiikoo fi karoora koo guddaadha. Waaqa wajjin kun ammoo yeroo gabaaba keessatti ni ta'a jedheen amana.
Waanti gaariin fi waantii milkii halkan tokkotti hindhufu
Dawiit Iteefa, Artistii fi abba qabeenya
Gorsa dargaggoota guddina haawwaniif qabu:
''Wanti gaariin fi milkii qabuu halkan tokkotti hin dhufu''. Carraaqqii fi dadhabbii waggoota hedduu fudhachuu danda'a.
Walumaagalatti hojii hojjannutti gammaduun, jaallachuu fi itti cichuun hanga dhumaatti yaalii taasisuun ammoo milkaawina fida. Garuu yeroo tokkoo tokkoos kufaatiin milkaa'iina nu barsiisee darba. Kanallee beekuu qabna.
Jabaatanii deeman malee gaara hinbahani akka jedhamu, yoo nuti jabaannee tattaafanne Rabbi illeen nu gargaara. Kanaafuu jabaadhaa haala mijataa qofa eeguu utuu hinta'in yeroo mara carraaqqi godhaa jechuun barbaada.
Goodayyaa suuraa Aadaa hojii cimanii hojjechuu sabakoo irraan bare